~ ဏီလင်းညို ~: ကျွန်တော်နှင့် သရက်သီးသုပ်
စာရေးသူ ~ဏီလင်းညို~ စာရေးပြီးချိန် 4:43 AM
ဏီဏီရေးတဲ့ စာအသစ်လေးတက်လာတာမြင်လို့ အရမ်းဝမ်းသာသွားတယ် တဆက်တည်း သရက်သီးသုပ်လို့မြင်လိုက်လို့ စာမဖတ်ခင် သရေကျချင်သွားတယ်...မသိမသာမြိုချပြီး စာကိုဝင်ဖတ်ရတယ်...။ သရက်သီးသုပ်ဇာတ်လမ်းလေးကိုဖတ်ပြီးတော့လဲ ငယ်တုန်းက အဖွားရဲ့ သရက်ခြံကိုသတိရလွမ်းတမိသွားတယ်ဗျာ...။ အိုခေ ဏီဏီ မချစ်ကြီးရဲ့ ဆုံတွေ့ပွဲမှာ ပြန်တွေ့ကြမယ်...း)
ကိုဏီလေး...ငါ့မောင်လေး စာလေးဖတ်ရတာ ၀မ်းသာတယ်။ ဘယ်တော့ရေးရေး၊ ဘာလေးပဲရေးရေး လက်ရာလေးက ကောင်းနေတာပဲး)))
အပြေးလာပြီး သရက်သီးသုတ်လာလုစားပါတယ်။ :D ဒီအရပ်ဒေသမှာတော့ အိမ်တော်တော်များမှာ သရက်ပင်တွေစိုက်ထားကြာပေမဲ့ အသီးတွေ မခူးပဲ အလှထားကြလို့လေ.. ကျောင်းဆင်းကျောင်းတက် သရက်သီးတွေကို လိုက်ငေးရင်း တခါတလေ အကုသိုလ်စိတ်တောင်ဝင်မိတယ် :D မနေ့ကတောင် စားချင်လွန်းလို့ ၀ယ်လာသေးတယ် စားမကုန်တာကိုလည်း ဆားရည်စိမ်ထားတယ်။:)ကိုဏီလင်းညို ကိုယ်ကျန်းမာစိတ်ချမ်းသာပြီး စာများများရေးနိုင်ပါစေ.......။
သရက်သီးမြင်မှဘဲ စာရေးဖို့သတိရတော့တယ် ထင်ပါရဲ့
ဒီသရက်သီးသာ မတွေ့လို့ကတော့ မိညိုတို့ စာရေးဦးတော့မယ် မထင်ဘူး။
စာလေးဘာလေး ရေးလာလို့ ..
ဟိုနေ့က သီချင်းလာတင်တာ စာရေးဖို့ ကီသွင်းတာထင်တယ် ဟုတ်လားး)
ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ နောက်များမှာလဲ စာတွေ ရေးဦးပေါ့အေ။
စာလေးဖတ်ရတာ ဝမ်းသာလိုက်တာ။ အမှတ်တရတွေထဲက အမှတ်တရလေးတစ်ခုပေ့ါ။ အရှိန်ရလာပြီမို့ စာတွေဖတ်ရတော့မှာကို တွေးမိပါရဲ့။
ကိုဏီးစာတွေ မဖတ်ရတာ ကြာပြီ။ ကျွန်တော်တို့လည်း ဘီးစီးတွေ ပြနေလို့ဗျို့ ။ မြန်မာပြည်ကို လွမ်းတယ်။
သရက်သီးသုတ်လေး ၀င်စားသွားပါတရ်နော်..နဲနဲလေး ပါ. :).အကို့ စာတွေ အမြဲဖတ်ပါတယ်. ပြန်တွေ့ ၇လို့ဝမ်းသာပါတယ် နော်. :)
ခုလို လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်မြန်မာတွေ စုစုစည်းစည်းနဲ့
အတွက်တော့ တကယ့် ပျော်စရာ၊ကြည်နူးစရာလေး..။
ကိုလင်းရေ စာတွေပြန်ရေးလို. ၀မ်းသာပါတယ်။ ဆက်ရေးပါအုံးနော်။ ကျန်းမာရေးလည်း ဂရုစိုက်ပါနော်။
အစ်ကို စာတွေကို ပြန်ဖတ်ရတာ ၀မ်းသာလိုက်တာဗျာ ...
ကျန်းကျန်းမာမာနဲ့ စာတွေထပ်ရေးအုန်းဗျ ...
တချို့ ဆို လျက်ဆား နဲ့တဲ့..။ ;)
ဆရာ အားလုံးက ဆရာကို နေကောင်းလား ပြောပြောနေတော့ စိတ်ထဲမှာ တစ်မျိုးပဲ။ သူတို့ ပြောသလို ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်။ ဆရာ နေကောင်းလား။ ဆရာတို့ သုပ်တဲ့ သရက်သီးသုပ် လေး စားချင်လိုက်တာ။ ကျွန်တော် က ဆရာရဲ့သရက်သီးသုပ်လေး ကို အခုမှဖက်ရတဲ့အတွက် စိတ်မကောင်းဘူး။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော် ဖက်နေတဲ့အချိန်မှာ ပဲ ဆရာတို့ တစ်တွေစားနေတာကို မြင်နေမိပါတယ်။
ဖေ့ဘွတ်မှာတွေ့ လို့...ဒီသရက်သီးသုပ်လေးကတော့ ပြောစမှတ်ကို တွင်ရော...အင်း ဘာလိုလိုနဲ့သရက်သီးသုပ် မစားရတာတောင် ကြာပြီကောလား..ကိုဏီပို့ စ်ဖတ်ပြီး သရက်သီးသုပ် စားချင်သွားတယ်...း)
တခါတလေ ...ဘ၀မှာ ဆုံခဲ့ဖူးတာလေး၊ ဖြစ်ပျက်ခဲ့ဖူး တာလေးကို ရေးနေတဲ့အချိန် ခံစားရတဲ့ ပီတိက ဘယ်အရာနဲ့မှ မတူဘူးနော်၊ ကိုယ်တိုင်လဲ တလောကမှ တောင်ပေါ်ပူတာအိုမြို့လေးမှာ နေထိုင်ဖူးခဲ့တာကိုရေးရင်း ပီတိတွေဖြစ်ခဲ့ဖူးတယ်၊ ကိုဏီလင်းလဲ ဒီလိုပဲဖြစ်နေမှာ :)
နောက်..အဝေးရောက်သူတွေရဲ့ ခံစားမှုလေးတွေကိုပါ တွေ့လိုက်ရတယ်
ဖိနပ်တစ်ဖက်ကျသွားလို့နောက်တစ်ဖက်ပါလှမ်းပစ်လိုက်တဲ့မင်းနိုင်အကြောင်းဖတ်မိတော့ ဂန္ဒီကြီးအကြောင်းတောင်သတိရသွားတယ် :)